अब गाईको पनि जन्म-मृत्यु र बसाइ-सरार्इ दर्ता, किसानलाई भत्ता ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब गाईको पनि जन्म-मृत्यु र बसाइ-सरार्इ दर्ता, किसानलाई भत्ता !
रुपन्देही, कार्तिक २३ । जिल्लको तिलोत्तमा नगरपालिकामा गाईको पनि जन्म, बसार्इ सरार्इ र मृत्यु दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, गाईको जन्म, बसार्इ सरार्इ र मृत्यु दर्ता गराएबाफत किसानहरुले भत्तासमेत पाउँछन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले छाडा गाई बढ्दै जाँदा सडक दुर्घटना र किसानको बालीनालीमा नोक्सानी हुने समस्या रोक्ने उद्देश्यले यस्तो उपाय निकालेको हो ।
याे पनि पढ्नुस रोहिणी गाउँपालिकामा फोरम बिजयी
अब नगरपालिकाले गाई पालेका किसानको गोठ–गोठमा कर्मचारी खटाएर गाईको लगत लिने र दर्ता गराउने छ । तिलोत्तमामा व्यवसायीक गाई पालन बढ्दै गएसँगै छाडा गाईको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । गाईको दर्ता गरेपछि छाडा छाड्न नदिन सम्भावित नाकाहरुमा नगर प्रहरी परिचालन गरिने नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन रूपन्देहीको १२ स्थानीय तहका माओवादी उम्मेदवार
ट्याग्स: cow, Rupandehi